ဟဒီးဆ်: (ကဗီရဟ်)ပြစ်မှုကြီးများမှာ (၁) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ရှိရ်က်ပြုခြင်း (၂) မိဘနှစ်ပါး၏ အမိန့်ကို ဖီဆန်ခြင်း (၃) အသက်ဇီဝိန်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း (၄) မုသားကျိန်ဆိုခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: (ကဗီရဟ်)ပြစ်မှုကြီးများမှာ (၁) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ရှိရ်က်ပြုခြင်း (၂) မိဘနှစ်ပါး၏ အမိန့်ကို ဖီဆန်ခြင်း (၃) အသက်ဇီဝိန်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း (၄) မုသားကျိန်ဆိုခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . နှလုံးသားကို နူးညံ့စေသော ဆုံးမဩဝါဒများ။ . အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကို ရှုံ့ချခြင်း။ .
အဗ်ဒုလ္လာဟ် ဗင်န် အမ်ရ်ဗင်န်အာဆ်ွ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)မိန့်တော်မူသည်။ (ကဗီရဟ်)ပြစ်မှုကြီးများမှာ (၁) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ရှိရ်က်ပြုခြင်း (၂) မိဘနှစ်ပါး၏ အမိန့်ကို ဖီဆန်ခြင်း (၃) အသက်ဇီဝိန်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း (၄) မုသားကျိန်ဆိုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဤဟဒီးဆ်တော်တွင် အကုသိုလ်ကြီးများဟု သတ်မှတ်ထားသည့် အချို့သောပြစ်မှုများကို ဖော်ပြထားပေသည်။ ထိုသို့ခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ လောကီ၊လောကုတ္တရာနှစ်ဌာနစလုံး၌ ၎င်းပြစ်မှုတို့၏ ကြီးမားလှသည့် အန္တရာယ်သည် ၎င်းတို့အား ကျုးလွန်သူနှင့် လူသားအားလုံးပေါ်သို့ ကျရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ပထမဦးဆုံးပြစ်မှုမှာ “အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ရှိရ်က်ပြုခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ကုဖ်ရ်သွေဖည်ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် အတူအခြားတစ်စုံတစ်ရာအား ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် မိမိ၏အရှင်မြတ်အား ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပြစ်မှုမှာ “မိဘနှစ်ပါး၏ အမိန့်ကိုဖီဆန်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ (အုကူးက်)၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ ဒုက္ခဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် ကိစ္စရပ်မျိုးဖြင့်မိမိ၏ မိဘနှစ်ပါး သို့မဟုတ် တစ်ပါးပါးကို ဒုက္ခရောက်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ မိဘနှစ်ပါးအား ရိုသေလေးစားမှု မရှိခြင်း၊ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်း၊ မိဘတို့ကသားသမီးအား လိုအပ်နေချိန်၌ ၎င်းသားသမီးများက မိဘတို့၏ အရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မပေးခြင်း၊ ဂရုမစိုက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ တတိယပြစ်မှုမှာ “အသက်ဇီဝိန်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အသက်တစ်ချောင်းအား မတရားသဖြင့် ရန်ငြိုးထား၍ သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် လူသတ်မှုကြောင့် အစ္စလာမ့်ဥပဒေအရ သေဒဏ်စီရင်ခံရခြင်း၊ အခြားသော ကိစ္စတခုကြောင့် ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်ခြင်းတို့သည် ဟဒီးဆ်တွင် ဖော်ပြထားသော သတ်ဖြတ်ခြင်း၌ မပါဝင်ပေ။ ထို့နောက် ဟဒီးဆ်တော်အား “မုသားကျိန်ဆိုခြင်း”ကို (မပြုရန်) သတိပေးခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ မုသားကျိန်ဆိုခြင်းကို အလ်ဂမူစ်(နစ်မြုပ်ခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း)ဟု ခေါ်ဝေါ်ရခြင်းမှာ မုသားကျိန်ဆိုသူကို အကုသိုလ်၌ သို့မဟုတ် ဂျဟန္နမ်ငရဲမီး၌ ကျရောက်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူသည် သိလျက်နှင့် လိမ်လည်ကျိန်ဆိုခဲ့သည့် အတွက်ဖြစ်သည်။
ဤအကုသိုလ်များသည် ပြစ်မှုကြီးများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၌ ကျရောက်မည်ကို သတိပေးတားမြစ်ထားသည်။
ကျိန်ဆိုခြင်း၏ အမျိုးစားများကို တင်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ
၁။ (ယမီးနုလ်ဂမူဆ်)မုသားကျိန်ဆိုခြင်း။ ၎င်းကျိန်ဆိုမှုသည် ကျိန်ဆိုသူအား ဂျဟန္နမ်ငရဲမီး၌ နစ်မြုပ်စေသည်။
၂။ (အလ်ယမီးနုလ်မွန်အကိဒဟ်)အခိုင်အမာကျိန်ဆိုခြင်း။ ကျိန်ဆိုသူသည် အရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်ရန်ဖြစ်စေ ကျိန်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။အကယ်၍ ၎င်းသည် မိမိကျိန်ဆိုမှုကို ချိုးဖောက်ခဲ့သော် ထို့အတွက်(ကဖ်ဖာရဟ်) အပြစ်ဖြေရန် တာဝန်ရှိသည်။
၃။ (ယမီးနုလ်လဂ်ဝ်)ကျိန်ဆိုသူသည် မရည်ရွယ်ဘဲ နှုတ်မှအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အချည်းနှီး ကျိန်ဆိုခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ အလ္လာဟ်ကစမ် လုံးဝ မဟုတ်ပါ၊ အလ္လာဟ်ကစမ် ဟုတ်ပါတယ် စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဟဒီးဆ်တော်တွင် ဤအချက်လေးချက်ကိုသာ ဖော်ပြထားရခြင်းမှာ ၎င်းတို့သည်အပြစ်အားဖြင့် အကြီးမားဆုံးနှင့် အပြင်းထန်ဆုံး အကုသိုလ်များဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအချက်လေးချက်သာ ပြစ်မှုကြီးများဖြစ်သည်ဟုရည်ရွယ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။
အသင်တို့သည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမည့် အပြစ်ခုနှစ်မျိုးမှ ရှောင်ကြဉ်ကြပါ။ သာဝကကြီးများက အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် ထိုအပြစ်များသည် အဘယ်အရာများပါနည်းဟု မေးလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာကို ယှဥ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်း၊ စုန်းပယောဂဖြင့်ပြုစားခြင်း၊ အသက်တစ်ချောင်းအား မတရားသဖြင့်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အတိုးစားခြင်း၊ အဖမဲ့ကလေး၏ ပစ္စည်းဥစ္စာကို စားခြင်း၊ စစ်မြေပြင်မှ ထွက်ပြေးခြင်းနှင့် (မကောင်းမှုအပေါ်)အာရုံမထားသော အပြစ်ကင်းစင်သည့် မုအ်မင်န်အမျိုးသမီးများအား (တရားမဝင်ကာမကျူးလွန်သည်ဟု) စွပ်စွဲခြင်းတို့ဖြစ်သည်။